Al-Shabaab oo sare u qaadday ololaha askareynta carruurta
Ururka argaggixisada ah ee al-Shabaab wuxuu sare u qaaday ololahiisa ku aaddan askareynta carruurta iyo odayaasha si uu u kordhiyo dagaal-yahannadiisa tiradooda yaraatay. Ismaaciil oo ahaa ardey 11 jir ah, waxaa la waayay labo sano hadda ka hor isagoo kasoo socdo iskoolka Baidhabo. Wuxuu haatan jiri lahaa 13.
“Ilaa iyo haatan weli kama aan samrin wiilkeyga. Waxaan aaminsanahay in aan kulmi doonno,” ayuu yiri Maxamuud oo ah aabbaha Ismaaciil, wuxuuna haatan ku nool yahay magaalada Muqdisho. “Ismaaciil wuxuu ahaa rajada ugu weyn ee nolosheenna, aad ayaan ugu xiisay wiilkeyga,” ayuu yiri. Maxamuud wuxuu sheegay inuu hubo in al-Shabaab uu ka dambeeyay af-duubka wiilkiisa iyo saddex kaloo ka mid ahaa ardeyda iskoolka Baydhabo. Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab wuxuu inta badan galaa tuulooyinka wuxuuna ku khasbaa qoysaska inay dhiibaan carruurtooda. Waaliddiinta carruurtaas hadday diidaan inay dhiibaan carruurtooda, ururku wuxuu go’aansadaa inuu carruurta si khasab ah ku qaato.
“Waxaan tuhunsannahay in carruurtaas uu ururka al-Shabaab af-duubay sababtoo ah inta carruurta la waynin ururka ayaa nagu khasbi jiray inaan dhiibno carruurteenna laga billaabo da’da 7 jir si ay uga qeyb-galaan dagaalladooda,” ayuu raaciyay Maxamuud. Ururka al-Shabaab weligiisbo wuxuu ahaa urur askareeyo carruurta da’da yar, laakiin laga billaabo sannadkii 2017-kii wuxuu sare u qaaday af-duuka carruurta si uu ugu khasbo inay ka qeyb-galaan dagaalladooda aan macnaha laheyn.
Bishii Jannaayo ee sannadkaan, ciidammada dowladda Soomaaliyeed waxay ururka kasoo rideen carruur tiradoodu dhan tahay 37 kaddib markii ciidammada ay howl-gallo amniga lagu sugayo ka qabteen koonfurta Soomaaliya. Isagoo ka hadlayo howl-galkaas, wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan wuxuu warbaahinta u sheegay in isticmaalka carruurta ee ururka uu tusinayo in jab weyn uu soo gaaray ururka.